हिमालय खबर | कांग्रेसको घोषणापत्रअन्तर्गत काम गर्नेछु : रेणु दाहाल
केशव भट्टराई / वसन्त पराजुली ,
प्रकाशित २८ बैशाख २०७४, बिहीबार | 2017-05-11 01:15:08
नेकपा माओवादी केन्द्रकी पोलिटव्युरो सदस्य एवम् अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव रेणु दाहाल कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको समीकरणपश्चात् भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरकी साझा उम्मेदवार हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी भएका कारण पनि रेणुको उम्मेदवारीले चर्चा पाएको छ ।
कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर उनीलाई सहयोग गर्ने भएपछि मेयरमा निर्वाचित हुनेमा रेणु विश्वस्त छिन् । उनीले आफू निर्वाचित भएपछि भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसले नगर विकासका लागि अघि सारेको घोषणापत्रअन्तर्गत नै काम गर्ने बताइन् । प्रस्तुत छ, युवा नेतृ दाहालसँग हिमालय खबरले गरेको कुराकानी-
१) भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, घरदैलोका क्रममा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
– जनताको घरदैलो गर्दैगर्दा मैले उत्साहजनक सहभागिता पाएको छु । यसवाट म विशेष खुशी छु । समय अभावको कारणले सम्पूर्ण नगरवासीको घर–घर जान नसके पनि जनताले जुन ढंगको ममता मप्रति दर्साउनु भएको छ, यसले मेरो विजयलाई सुनिश्चित गरेको छ । जनसमुदायलाइ भावी योजना र मेरो परिकल्पना राख्दा सकरात्मक प्रतिकृया पाएको छु । मलाई विजय भएर भरतपुरलाई उत्कृष्ट शहर बनाएर जाने आत्मविश्वास बढेको छ । जनसमूदायको सकरात्मक सुझावले भरतपुरको यथार्थ चित्र पाएको महसुस गरेको छु । मुलतः म उत्साहित नै छु ।
२) तपाइँले अहिले मतदाताहरुसँग भेट्दै गर्दा जित्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– सर्वप्रथम चितवन आफैँमा ७६ औँ जिल्ला हो । यहाँको जनसमूदाय सचेत छन् । मेरो उम्मेदवारीले सुन्दर नगरी भरतपुरको विकास र सम्वृद्धिमा केन्द्रीय स्रोत र साधनसँग जोडेर एउटा नमूना सहर बनाउने प्रण गरेको छु । जुनकुरा जनसमुदायले बुझ्नु भएको छ । जनता नै निर्णायक शक्ति हो । मेरो जन्मभूमिमा एकपटक जनताको सेवा गर्ने अवसर दिनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
३) तपार्इंको पार्टीले नेपाली कांग्रेससँग चुनावी एकता त ग¥यो तर कांग्रेसजनले तपाईलाई भोट दिने कुरामा कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– कांग्रेस राजनीति संस्कार भएको पार्टी हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ता साझेदारी रहेको र संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पनि यिनै दलमा छ । जसका निम्ति कांग्रेस र माओवादीबीच सहकार्य अनिवार्य छ । यो राजनैतीक सहकार्यले पैदा गरेको समीकरण हो । त्यसैले यो एकतासँग लोकतन्त्रवादीहरु उत्साहित भएकाले भोट हाल्नेमा म विश्वस्त छु । मैले बुझेअनुसार माओवादी र कांग्रेसबीचमा चितवनमा कहिलै पनि तिक्तता छैन । त्यसैले पनि कांग्रेसजनले मलार्इ भोट हाल्नुहुनेछ । म कांग्रेसकै घोषणपत्रअनुसार नै काम गर्ने छु ।
४) भोट फ्लोर क्रस गरेर गोलाकारभित्र हँसिया हथौडामा भोट हाल्न रुखमा भोट हाली रहेकाहरुलार्इ गाह्रो हुन्छ कि ?
चुनाव चिन्ह प्राविधिक कुरा हो । राजनैतीक सहमति प्रमुख कुरा हो । नेपालकै उदाहरण दिने हो भने द्वन्द्वमा रहेका हामी माओवादी र कांग्रेसलगायतका राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति सहकार्य र एकता गरेर शान्ति प्रकृया सम्पन्न गर्दै अहिले संविधान जारी गरेको अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ । मुलुकको आवश्यकताले राजनैतिक सहमति भएको हो । आस्था र विचार फरक भए पनि राजनैतिक समझदारीमा एक अर्कालार्इ सहयोग गर्ने कुरा अनौठो कुरा होइन । अहिले कांग्रेस र माओवादीको सहकार्य राष्ट्रको आवश्यकता हो । त्यसैले कांग्रेस मित्रहरुले पनि वुझ्नु भएको छ की दुवै पार्टीको आवश्यकताले हामी एक ठाउँमा उभिएका हौं । हामीलाइ उहाँहरुले भोट हालेर मलाई विजय गराउनु हुनेछ । हामी पनि उहाँहरुलार्इ भोट हालेर विजय गराउने छौँ ।
५) तपाईंलाई त चितवनवासीले त्यति सारो चिनेका छैनन्, के प्रचण्डपुत्री भएकै कारण भोट दिन्छन् त ?
– सबभन्दा पहिला म चितवनसँग अपरिचित मान्छे हैन । पटक पटकको निर्वाचनमा यहीको मतदाता भएर सहभागी रहँदै आएको छु । मेरो राजनैतिक जीवन कलिलै उमेरमा चितवनबाटै शुरु भएको हो । राजनैतिक कार्यक्षेत्रका हिसावले मेरो पार्टीको आवश्यकतामा जहाँ जहाँ पठायो त्यै गएर आफ्नो भूमिका निभाउँदा चितवनमा कार्यक्षेत्रका हिसाबले नजोडिँदा नौलो लागेको हो । तर चितवनको वस्तुगत धरातलप्रति म अनभिज्ञ छैन । मन मुटु र भावनाले म चितवनकै छोरी हुँ । म अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा भूमिका निभाउन गएको हुँ । अधिकार प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा म आफ्नो जन्मभूमिलाई कर्मभूमि बनाउँदै बाँकी राजनैतिक जीवन चितवनमै बिताउने गरिआएको छु । राजनैतिक विचारका हिसावले मेरो बुबा प्रचण्डप्रति गर्व गर्छु । उहाँकै मार्ग निर्देशनमा हिँडेको छु ।
लडाइँका मोर्चाहरुमा अग्रभागमा नेतृत्व गरेको अनुभव छ । कहिले म जनयुद्धको तुफानी केन्द्रमा नेतृत्वमा रहे भने कहिले काठमाण्डौको सहरमा सडक आन्दोलन गरेँ । आज सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा ल्याएर योगदान गर्न म चितवन आएको छु । मेरो आफ्नै राजनैतिक इतिहास र परिचयप्रति चितवनवासी अनभिज्ञ छैनन् वास्तवमै चितवनका जनसमुदायले मलाई माया र ममता गरेर अत्याधिक मतले जिताउनु हुनेछ । मेरो इमान्दारिता मेरो परिचय हो । लगनशीलता मेरो जीवन हो । जनताको सेवा गर्नु कर्तव्य ठान्दछु । बाँकी व्यवहारमा परीक्षण गर्न जनतामा अनुरोध गर्दछु । जहाँ प्रचण्डकै छोरी भन्ने सवाल छ प्रचण्ड मेरो बुबामात्रै हैन राष्ट्रको नेता हो । एउटा कार्यकर्ताले पाउने सुविधा मैले पाउनुपर्ने मेरो अधिकार हो । यसमा मलाई गर्व छ ।
६) त्यसो हो भने तपाइँ जनताबाट निर्वाचित हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– प्रकृयाले त म विजय घोषणा हुनमात्रै बाँकी छ । जनताको अपार समर्थन र मायाले म विजयी भैसकेकी छु ।
७) तपाइसँग महानगर विकासका योजनाहरु के–के छन् ?
– मेरो पहिलो सपना भरतपुरलार्इ सम्मृद्ध र आधुनिक सहर बनाउने हो । मेरो पहिलो काम नमुना विकाससहितको वैकल्पिक राजधानी बनाउनु रहने छ । यस्तै भरतपुरलाई व्यवस्थित सहरीकरण गराँउदै महानगरमा मेट्रो रेल, भरतपुर विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा गराउने छु । भरतपुर अस्पताललार्इ शिक्षण अस्पताल बनाउँदै महानगरभित्र आफ्नै नगर अस्पताल बनाइने छ । भरतपुरमा विकास हुँदै गरेको मेडिकल सिटीलार्इ व्यवस्थापन गर्दै यसको विकास गरिने छ । पर्यटन विकासलाई टेवा पु¥याउन चितवन देखिने भ्यू टावर, आधुनिक मनोरञ्जन पार्क, हरेक वडामा बालबगैँचा र उद्यान निर्माणमा जोड दिइने छ ।
वातावरणका हिसाबले एकघर दुई रुख रोपिने छ । पर्यावरणीय मापदण्डका आधारमा उद्योगहरु सञ्चालन गरिने छन् । सूचना प्रविधिलाई निःशुल्क इन्टरनेट र फ्रि वाइफाइ क्षेत्र बनाइने छ । साथै सामाजिक सुरक्षाका हिसावले केन्द्रीय सरकारले दिने भत्तामा महानगरबाट १ हजार रुपैयाँ थपिने छ । जनताका बसोबास भएका र सार्वजनिक सडकहरु कालोपत्रे गरिने छन् । महानगरपालिकामा भित्री र बाहिरी चक्रपथ निर्माण गरिने छ । सडक भौतिक पूर्वाधार महानगरको सापेक्षताअनुसार विकास गर्दै लगिनेछ । नारायणी र राप्तीको तटबन्धन गरी उकास भएको जमीनको प्रयोगमा ल्याइने छ । नारायणी नदीमा जलयात्राको विकास गरिने छ ।
केशव भट्टराई / वसन्त पराजुली -
विकास राज न्यौपाने २ असार २०७८, बुधबार
अमेरिका । एनआरएनए एनसिसी अमेरिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बुद्धि सुवेदी चुनाव सकिएकाले जीत हारको विषय पनि समाप्त भएको हुँदा अब सकारात्मक उत्साहका साथ अमेरिकामा बस्ने नेपाली समुदायका पक्षमा सक्रियरुपमा का ...
हिमालयखवर संवाददाता २० बैशाख २०७८, सोमबार
ड्यालस (टेक्सस) - ड्यालस फोर्टवर्थ मेट्रोप्लेक्स अन्तरगतको युलेस सिटी काउन्सिलको निर्वाचनमा पहिलो पटक नेपाली समुदायका एक अगुवाले उम्मेदवारी दिएका छन् । Mr. Paudel isasocial activist, serving this c ...